Man v Machine: Nwere ike Computers Cook, Dee na agba Mma Karịa Anyị? - News Ọchịchị
Man v Machine: Nwere ike Computers Cook, Dee na agba Mma Karịa Anyị?
Amamịghe echiche nwere ike ugbu a merie a egwuregwu, -aghọta ihu gị, ọbụna ịrịọ megide gị adọba ụgbọala tiketi. Ma ike ya na-eme stof ọbụna ụmụ mmadụ chọta tricky?
Isiokwu a na-akpọ “Man v igwe: nwere ike kọmputa esi nri, dee na agba mma karịa anyị?” e dere site Leo Benedictus, n'ihi na The Guardian on Saturday 4th June 2016 08.00 UTC
One video, maka m, gbanwere agbanwe ihe niile. Ọ bụ footage si ochie Atari game Kụchapụ, onye ebe ị slide a naa ekpe ma ziri ezi, tinyere ala nke ihuenyo, -agbalị ibibi brik site bouncing a bọl n'ime ha. O nwere ike ị na-agụ banyere ọkpụkpọ nke egwuregwu: ihe algọridim mepụtara DeepMind, na British Amamịghe echiche ụlọ ọrụ onye AlphaGo omume na-eti otu nke kasị ukwuu mgbe Gaa egwuregwu, Lee Sedol, tupu afọ a.
Ikekwe ị na-atụ anya a na kọmputa na-mma na egwuregwu kọmputa? Ozugbo ha maara ihe na-eme, ha na-eme ya kpu anọgide karịa mmadụ ọ bụla. DeepMind si Breakout player amaghị ihe ọ bụla, Otú ọ dị. Ọ bụghị kenyere na ntụziaka banyere otú egwuregwu ọrụ; ọ bụghị ọbụna gwara otú e si eji njikwa. All o nwere bụ ihe oyiyi na ihuenyo na iwu iji nweta ọtụtụ ihe dị ka o kwere omume.
Watch na video. Na mbụ, na naa-ahapụ na obi ụtọ dobe n'ime nchefu, ebe ọ maara na ọ dịghị mma. N'ikpeazụ, dị nnọọ mucking banyere, ọ gara na obi ụtọ azụ, -ebibi a brick na-akawanye a mgbe, otú ọ na-amata nke a ma na-eme ya ọzọ mgbe. Mgbe awa abụọ 'omume, ma ọ bụ banyere 300 egwuregwu, ọ na-kpọrọ mma, ka gị mma ma ọ bụ m ga-abụ. mgbe ahụ, mgbe banyere 600 egwuregwu, ihe ga-esi spooky. The algọridim amalite aiming na otu ntụpọ, n'elu na n'elu, iji burrow site na brik n'ime ohere n'azụ. ozugbo e, dị ka ọ bụla Breakout player maara, na na obi ụtọ ga-ibiaghachi gburugburu n'ihi na a mgbe, achịkọta free ihe. Ọ bụ ezigbo atụmatụ na kọmputa wee na ihe na ya.
"Mgbe anyị na-eme nnyocha hụrụ nke a, na n'ezie eju ha,"DeepMind si CEO, Demis Hassabis, gwara na-ege ntị na a technology ogbako na Paris. Ị nwere ike ekiri ya ngosipụta, oke, na-anụ ọchị na ịkụ aka mgbe igwe atụmatụ si ya burrowing atụmatụ. The kọmputa aghọwo nwere ọgụgụ isi, a bit dị ka anyị.
"Amamịghe echiche" bụ nnọọ ihe kasị ochie na ọtụtụ hyped niile Mgbakọ si uzu nkebi ahịrịokwu. Echiche mbụ mooted kpọrọ ihe site Alan Turing na Computing Machinery Ma Intelligence, na 1950 akwụkwọ nke ọ chọrọ ihe a bịara mara dị ka na Turing ule: ma ọ bụrụ na a igwe nwere ike obi sie gị site na mkparịta ụka na ọ bụ ụmụ mmadụ, ọ na-eme ihe dị ka mmadụ ọ bụla nwere ike ime iji gosi na ọ na-n'ezie na-eche echiche. Ma okwu Ai e adịghị eji ruo 1955, mgbe ole American mgbakọ na mwepụ John McCarthy chọrọ a ogbako maka ọkachamara. Nke a wee ebe ndị na-esonụ afọ, ọ bụkwa mgbe ahụ n'ọhịa na-agba ọsọ na a Olee ihe enyemaka abụọ-afọ iri okirikiri nke ọchịchọ gabigara ókè na obi nkoropụ. (Researchers ọbụna nwere a ọhụrụ okwu - "Ai oyi" --akọwa ya spells nke ejiji. 1970 na 1990s na karịsịa aka ike.)
Taa e nwere ihe a ọhụrụ apụta ìhè n'àgwà, nke anya iche ná ndị ọzọ: ọ na-adaba gị n'akpa uwe. A ekwentị nwere ike iti ụwa cheesi mmeri, -aghọta songs na redio na foto nke gị na ụmụ gị, na-asụgharị olu gị n'asụsụ ọzọ. The Nao robot sere ebe a na Yotam Ottolenghi nwere ike ije ije na abụọ ụkwụ, ekwu okwu, -ahụ a bọl na ọbụna agba egwú. (Ọ bụ a robot, ezie na, ọ bụghị Ai: ọ na-apụghị chepụta a menu.)
-Anụ banyere ọganihu na Ai, ị adịghị mkpa otu ọkachamara na-agwa gị inwe obi ụtọ, ma ọ bụ egwu. Nnọọ na ị na-amalite na-mmetụta: ọgụgụ isi bụ ebe a. O doro anya na Google nwetara mmetụta, oke, n'ihi na ọ zụtara DeepMind maka a nụrụ kepu kepu $ 650m. Na 2013, Facebook ulo oru ya onwe oru ngo, na atụmatụ ịzụlite ọdịdị ihu na ọchịchọ asụsụ ude maka saịtị. Developers maliteworị ọrụ na ọgụgụ isi chatbots, nke Facebook ọrụ ga-enwe ike kpọọ eji ya ozi ọrụ.
Rute ugbu a, kọmputa enwebeghị "nwere ọgụgụ isi" mgbe nile, ma ọ bụ naanị ndiduọ otú. Ha na na na ezi na mfe aga-eme na dazzle anyị, dị ka maths, ma ihe ọjọọ na ndị na anyị nke akwadoro, nke edidi kpọrọ ihe siri ike. The omume nke na-eje ije bụ ihe n'oge a ígwè ọrụ na-amụta dị ka ụmụ ọhụrụ na ka na-alụ; isi pottering aga-eme ịnọgide anya na nrọ. "Otu ihe atụ bụ ala nke na ị ma ọ bụ na m nwere ike ime ka a iko tii onye ọzọ kichin,"na-ekwu Prọfesọ Alan Winfield, a roboticist na Mahadum nke West nke England. "E nwere bụghị a robot na mbara ala na pụrụ ime nke a."
E nwere bụghị a robot na mbara ala ndị pụrụ ime ka a iko tii onye ọzọ kichin
Aka ịghọta ihe mere ndị mmadụ bụ nke siri ike, eche echiche banyere otú i nwere ike isi a na kọmputa na-aghọta ndị si foto. -enweghị Ai, ị ga-ama otú ị na-eme ya onwe gị mbụ, iji usoro na kọmputa. I nwere na-anakọta ma na-eche banyere ihe niile kwere omume ihe nakawa etu esi, na agba na shapes nke ihu, na otú ha na-agbanwe nọ n'ìhè, na akụkụ dị iche iche - na ị na-amaghị ihe dị ịrịba ihe na ihe dị apịtị na oghere. na Ai, ị na-adịghị ịkọwa: ị dị inye a ugwu nke ezigbo data na kọmputa ka ọ na-amụta. Olee otú ị chepụta mmụta software na-anọgide emume naanị ndị anabatara okwu, nke ógbè a ole na ole chọọ-mgbe na kọmputa ndị ọkà mmụta sayensị, ma o doro anya na ha nwetara on ka a na-eto eto site iche echiche, owuwu nke data-nhazi dabeere loosely na owuwu na ụbụrụ. (Nke a na-akpọ "miri emi mmụta".) Ma ugwu nile nke ezigbo data, ọma, nke ahụ bụ ihe Google, Facebook, Amazon, Über na ndị niile ọzọ eme ka dina gburugburu.
Mgbe a na ogbo, anyị na-amabeghị nke na-eji nke Ai ga-esi kacha mma. Josh Newlan, a California coder-arụ ọrụ na Shanghai, ọkọdọ Ịnọ nkịtị gwụrụ na-ege adịghị agwụ agwụ ogbako oku, otú o wuru ụfọdụ software na-ege ntị maka ya. Ugbu a, mgbe ọ bụla Newlan a kpọtụrụ aha, ya na kọmputa n'otu ntabi eziga ya a transcript nke ikpeazụ ọkara nkeji, obim elewo 15 sekọnd, mgbe ahụ na-arụ a ndekọ nke ya asị, "Ndo, M na-aghọta m okwu bụ na ogbi. "N'afọ gara aga, Josh Browder, a British afọ iri na ụma, wuru a free wuru ọkàiwu na-na-arịọ megide adọba ụgbọala tiketi; ọ na-ezube-ewu ọzọ nke na-eduzi ndị gbara ọsọ ndụ site mba ọzọ n'usoro ikpe-. The ohere na-... Ọfọn, ma eleghị anya, otu algọridim nwere ike ịgụ ahụ, ohere.
Ya mere ga igwe uche otu ụbọchị ịkarị ókè anyị? The nchọpụta m agwa na-akpachapụ anya, na ịkpachapụ anya iji mesie ihe ha na ígwè ọrụ apụghị ime. Ma m kpebiri itinye Ai ule: nwere ike ọ na-eme atụmatụ a nri nakwa dị ka Ottolenghi? Nwere ike ọ agba m Eserese? Bụ technology ka na-artificially nwere ọgụgụ isi - ma ọ bụ na-ya amalite ịdị nwere ọgụgụ isi, n'ezie?
The nri ule
Ọfọn, M ga-asị na ọ bụghị jọgburu. Ụmụ mmadụ na-ejekọ ozi m njọ. Ọ bụ ezie na eziokwu aha na IBM si Siri nri Watson-enye efere a ("Chicken Imeju Savoury n'ihu") bụ ihe dị ka appetizing dị ka ọ kwesịrị.
Iji ngosi ka onye siri nri Watson, na Guardian Izu ụka onwe siri nri-columnist Yotam Ottolenghi, M setịpụụrụ ha ezi a ọrụ. M jụrụ n'ihi na a efere dabeere na anọ Efrata na o yiri ka nke enweghị ebe dị nso onye ọ bụla ọzọ: chicken banyere n'imeju, Greek yoghurt, wasabi na tequila. Ha nwere ike tinye ihe ọ bụla ọzọ na ha mmasị, ma ndị na anọ nwere na-ke okokụre efere, nke m ga-esi nri ma rie. Siri nri Watson alaghị azụ, n'otu ntabi enye m abụọ pasta sauces. Ottolenghi bụ ihe circumspect. "Mgbe m nwetara ihe ịma aka m chere, 'Nke a na-agaghị arụ ọrụ,' "Ọ na-agwa m.
M chere na otu. Ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ m chere na m ga-eri abụọ efere na jisiri na-OK n'agbanyeghị na ha Efrata, kama n'ihi ha. N'ezie - na ị ga na-eche m a creep, ma otú ihe - Ottolenghi si uzommeputa bụ ihe ọhụrụ: imeju na-na yabasị na a tequila Mbelata, eje ozi na apụl, radish, beetroot na chicory slaw, na a wasabi na yoghurt mgbakwasa. The efere nwere ike ime ka-abaghị on akwụkwọ, ma m ripia a plateful mmetụta na bụla mmewere bụ. (Na vinaigrette thickened na yoghurt na wasabi kama mustard: kpọrọ, na-enye ya a na-agbalị.) Ottolenghi-agwa m nke Ntụziaka bụ nnọọ a wiska mkpụmkpụ nke publishable.
Ihe bụ, na efere wee were ya na otu ya ụbọchị atọ zuru okè. Ha na-enwe ike nụrụ ụtọ ma na-atụle flavors, textures, agba, okpomọkụ, n'ụzọ na Watson ike - ọ bụ ezie na e nwere "nneme" banyere agbakwunye a nzaghachi usoro na-eme n'ọdịnihu, Siri nri Watson si edu ndú engineer, Florian Pinel, agwa m. "A Ntụziaka dị otú ahụ a mgbagwoju ihe,"Ottolenghi kwuru. "Ọ na-esiri m ike ịghọta otú a na kọmputa na-agakwuru ya."
Yotam Ottolenghi na Siri nri Watson si efere Foto: Jay Brooks maka Guardian
Watson mbụ e wuru IBM iji merie telivishọn gameshow ize! na 2011. N'ụzọ ụfọdụ, ọ bụ a na-eduhie ịma aka, n'ihi na maka kọmputa siri ike nke a zaa na-aghọta ajụjụ, ọ maghị azịza; n'ihi na ụmụ mmadụ, ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu. Ma Watson merie, na ya technology malitere etinyere n'ebe ndị ọzọ, gụnyere dị ka a siri nri, amụba ọhụrụ Ezi ntụziaka dabeere 10,000 ezigbo ihe nlereanya e si Rie ọma magazine.
Mbụ ahụ software na-"ingest" ndị a Ezi ntụziaka, dị ka Watson otu etinye ya. A otutu mgbakọ wee banye ịghọta ihe ndị Efrata ndị, otú A kwadebere ha, ogologo oge ole ha na-esiri ihe maka, iji nwee ike ịkọwa otú iji ha na ọhụrụ efere. (The usoro ka nwere ike ịkụ afọ n'ala. Ọbụna ugbu a Siri nri Watson-atụ aro ihe mgwa akpọ "Mollusk", nke ọ na aka nke na-akọwa bụ "nke isii na-ogologo album site Ween".)
A ibu nsogbu nọ na-agbalị inye igwe a n'echiche nke uto. "Ọ dị mfe ezuru a na kọmputa na-ike a akwụkwọ Nchikota,"Pinel-ekwu, "Ma olee otú ọ na inwale otu?"Watson eziri tụlee nke ọ bụla mgwa dị ka a Nchikota kpọmkwem flavor ogige - nke e nwere ọtụtụ puku - na mgbe ahụ ikpokọta Efrata na nwere ogige ke nkịtị. (ụkpụrụ a, nri pairing, na-maara nke ọma n'etiti ụmụ mmadụ.) N'ikpeazụ, na software site nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka na-eme ka uche na-a mmadụ na-esi nri. A na-emesi ịtụnanya kama bara uru nri ime atụmatụ. "Siri nri Watson bụ n'ezie n'ebe ahụ kpalie gị,"Pinel akọwa. Onye ọ bụla uzommeputa abịa na-echetara gị ka "iji gị onwe gị na creativity na ikpe".
Na m kwesịrị. Nzọụkwụ mbụ bụ na-"tost ewepụghị-akwukwo pasili", nke dị nnọọ bụghị a ezi echiche. Ana m eme, n'ụzọ dị irè, a ngwa ngwa-esiri spiced anụ ezi na beef ragu, gụnyere ihe nile m anọ Efrata, ma Watson oddly na-agụnye kukumba na-agwakwa m ka m "oge na allspice", nke m na-eme na ụkpụrụ. N'ikpeazụ, M nwere a ọgaranya ihendori na a flavor kama nso farmyard, ma ọ bụghị uneatable. M ike nụrụ ụtọ na wasabi ma ọ bụ ndị tequila, nke m ụtọ banyere.
Yotam Ottolenghi na Nao robot gbazinyere n'ikike nke Heba ụlọ akwụkwọ praịmarị, London. Foto: Jay Brooks. styling: Lee Flude
Watson bụ nkọ na ọrụ siri ike, ma m njikere na-ekwu na nke a bụ ọ dịghị ihe karịrị a bit nke fun maka nri nerds, ruo mgbe Ottolenghi akwụsị m. "Echere m na echiche nke onye na-adịghị-isi nri banyere n'imeju na a bit nke anụ dị ukwuu,"Ọ na-ekwu. "Ọ intensifies na flavor. Ihe niile ga-ezukọta. Ọ bụrụ na m na-amalite afresh na nke a uzommeputa, O doro anya na ndị yoghurt adịghị dabara - ma m ga-ahapụ oroma akpụkpọ ahụ, a ole na ole nke ngwa nri. Echeghị m na ọ bụ a nnọọ njọ Ntụziaka. Ọ pụrụ ịrụ ọrụ. "
Mkpebi Watson odịbe weirdness nke Efrata, ma Ottolenghi-eme ka ha na-abụ abụ.
Na ide ule
-etinye obere Wordsmith na-esote na fearsome igwe nke IBM na Google, na ọ anya dị ka computationally elu dị ka a n'akpa uwe mgbako. Ma mgbe Watson fumbles site na ịmụ ọrụ, Wordsmith bụ ugbua na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-agụ ngwaahịa ahịa akụkọ si Associated Press, ma ọ bụ Yahoo si egwuregwu oru ndi, enwere ezigbo ohere ị ga-eche na e dere ha site a onye.
Wordsmith bụ ihe na wuru onye so dee. Mepụtara a ụlọ ọrụ dị na North Carolina akpọ akpaghị aka Insights, ọ plucks ndị kasị akpali ọkpụrụkpụ site a dataset na-eji ha ka ha mebere atumatu otu isiokwu (ma ọ bụ email, ma ọ bụ ngwaahịa ndepụta). Mgbe ọ na-abịa gafee n'ezie nnukwu ozi ọma, ọ na-eji ihe na-akpali mmasị asụsụ. Ọ dịgasị ekwu ma syntax na-eme ka ya ọrụ ọzọ ogugu. Ọbụna a ntugheriukwu robot siri nri nwere ike inwe ya ojiji, ma-ede maka ụmụ mmadụ na-agụ akwụkwọ ga-eji ire ụtọ. Ekirikarị ruo otu olu-ude na ngwaọrụ dị ka Amazon si ikwughachi, Wordsmith pụrụ ọbụna ikwu na a gwara mmadụ ajụjụ - banyere arụmọrụ nke ihe mmadụ ji investments, -ekwu - na a uche kwuru azịza, ezikwa ihe bụ ihe na-akpali mbụ, na-ahapụ ihe bụ na-akpali mgbe nile. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke atọ, ị na-eche ikpe 9000 ruteworo.
The atọ bụ nke a: Wordsmith ka akụkụ nke na-ede na ndị mmadụ adịghị aghọta dị mfe. Locky Stewart si akpaghị aka Insights-enye m a nkuzi. Ị dee n'ime Wordsmith a ikpe dị ka, "New ABC egosi na New York Inquirer si mgbasa bilie 3% na April. "Mgbe ahụ, ị ​​na-egwu gburugburu. The 3% -abịa si gị data, otú ị ahọrọ okwu bụ "bilie" na-ede a na-achị, mara dị ka a "alaka", nke ga-gbanwee okwu "bilie" na-na okwu a "gbara ọtọ" ma ọ bụrụ na pasent bụ karịa 5%. Mgbe ahụ ị alaka ụlọ ọrụ "bilie" na-"dara" ma ọ bụrụ na pasent bụ na-adịghị mma. Ọ bụrụ pasent bụ -5% ma ọ bụ ala, "Bilie" na-aghọ "plummeted".
Mgbe ahụ ị na-eri nri ya synonyms. Ya mere, "plummeted" nwekwara ike-"dara sharply site". "The Inquirer si mgbasa" nwere ike ịbụ "mgbasa na Inquirer". "Gbara ọtọ" nwere ike ịbụ "elu" na na. Mgbe ahụ ị tinye ihe ahịrịokwu, ikekwe banyere online okporo ụzọ, ma ọ bụ banyere nke ụbọchị 'ebipụta mbipụta rere kacha mma, ma ọ bụ banyere atụnyere afọ on afọ. Mgbe ahụ ị ga-esi nkọ. Ị na-agwa Wordsmith itinye ahịrịokwu na ihe ndị kasị ihe akụkọ ọmụma mbụ, kọwaa ikekwe dị ka ndị na-egosi ndị kasị ukwuu pasent mgbanwe. Ma eleghị anya, ị na tinye a n'alaka ụlọ ọrụ na-ekwu na a pụta bụ "ihe kasị mma / kasị njọ arụmọrụ n'etiti àgwà utu aha". hell, ị pụrụ ọbụna na-akụziri ya ụfọdụ ochie Fleet Street aghụghọ, nke mere na ọ bụrụ na mgbasa plummets ibe-amalite "Editor Charles Kane nke chere ihu di ọku nnyocha dị ka", ma ọ bụrụ na mgbasa nwere "gbara ọtọ" a na-aghọ "Charles Kane ka ọnụ na-akatọ na ozi ọma na". Fanye "ihe" ma ọ bụ "ọzọ" ma ọ bụ "na-aga n'ihu" ma ọ bụrụ na ị na-ahụ otu ihe ahụ ọnwa abụọ na esepu.
"The Amamịghe echiche bụ n'ezie ọgụgụ isi mmadụ na-ewu netwọk nke mgbagha,"Stewart-ekwu, "Otu netwọk ị ga-eji mgbe na-ede otu akụkọ. Ọ pụrụ e mepụtara 10 ma ọ bụ 15 afọ ndị gara aga, na koodu, ma mee ka ọ na-arụ ọrụ a ọnụ ọgụgụ Naanị ekwe omume n'oge na-adịbeghị. "O doro anya na ọ na-ewe ogologo kwadebe otu isiokwu on Wordsmith karịa dee otu conventionally, ma mgbe ị na-na na na mere otú, kọmputa nwere ike ebipụta a ọhụrụ akwụkwọ akụkọ mgbasa akụkọ kwa ọnwa, na bụla akwụkwọ akụkọ, sekọnd ole na ịnweta ozi. Ọ nwere ike na-ebipụta ọtụtụ nde akụkọ na nkeji - ma ọ bụ na-ebipụta naanị ụfọdụ n'ime ha, ma ọ bụrụ na data adịghị eru a nyere fọrọ nke newsworthiness. N'ihi ya ọ na-aghọ ihe akpaghị aka nchịkọta akụkọ, oke, na kemeghi na-amasị na-akpachapụ, ugboro ole na nchiyo.
N'ihi na Wordsmith si ọrụ, M na-atụ aro football: ọ bụ a ubi na-emepụta a otutu data na nwere a nagu na chọrọ ahaziri isiokwu. Guardian football onye so dee Jacob Steinberg ọrụ afọ ofufo na-na kọmputa, na m na-enye a table nke eziokwu si na-adịbeghị anya Premier League: ikpeazụ oge ji otu ọnọdụ na a oge ọkwá na Christmas na na njedebe, mgbaru ọsọ gbatara na conceded, n'elu scorer aha na ngụkọta, uru nke okpomọkụ na-enyefe na a see okwu si manager.
Na-arụ ọrụ nanị site na nke a data, kọmputa na ụmụ mmadụ ga-onye ọ bụla dee a nyochaa nke oge n'ihi na a nyere club. Steinberg ahọrọ Leicester City na ndabere na ya nọmba kwesịrị ịnwe a akụkọ nke onye ọ bụla ga-ahụ. Wordsmith dịghị mkpa ka na-ahọrọ. Ọ ga-eme ihe niile 20.
Ndien ke akpanikọ ma kọmputa na ụmụ mmadụ ngwa ngwa mepụta nnọọ yiri ọrụ:
Ma Steinberg na Wordsmith anapụta ndị dị ịrịba ama nke mbụ ahịrịokwu. Ikekwe nkọ ada authentic, Akpaghị aka Insights iji ụfọdụ nkọ aghụghọ na-etinye mmetụta n'ime Judas ibuotikọ, astutely guessing na Leicester e "na-enwe olileanya iji gwụ n'elu 10 mgbe a 14 ebe imecha ikpeazụ oge ". M anya site Wordsmith si ọzọ isiokwu na Southampton, enwe okokụre asaa ikpeazụ oge, nwere "anya on a European ntụpọ", mgbe Manchester City "malitere na oge ná nrọ nke a otu aha gụchara abụọ".
ọzọ, Steinberg digs ọzọ bara uru n'ime nọmba, -egosi na Jamie Vardy ọ bụghị naanị gbatara 24 mgbaru ọsọ, ma na nke a bụ a pasent onu ogu nke otu ya si mgbaru ọsọ karịa na-jisiri site nile ma abụọ ọzọ Player. Maara otú Wordsmith na-arụ ọrụ, n'ezie, onye pụrụ n'ụzọ dị mfe ka o guzo ọtọ ime otu ihe ahụ. N'ezie achọ na site na ya, Steinberg dum ibuotikọ a gaara kere a ọkà Wordsmith programmer - na e wezụga otu akara. "Ọ bụ a kpokọtara oge,"Ọ na-ehota ihe Leicester manager, sị, n'ihu na-agbakwunye, "-Ezi ezi ma otú, nyere na a n'oge okpomọkụ mmefu nke £ 26.7m on enyefe mere ka ha nke asatọ kasị ala spenders ". Na "ezi ezi otú ahụ" na-egosi a so dee n'ezie ndị na-aghọta ihe ọ na-ede.
Mkpebi Steinberg bụ a mma so dee, ma ọ bụrụ na ị chọrọ 20 data-arọ isiokwu 10 nkeji.
The sere ule
A laptọọpụ chọrọ ka m ọchị. "Ọ bụ na a ọma na ọnọdụ," Simon Colton -ekwu. Ọ maara n'ihi na ọ bụ ọkà mmụta sayensị na-kenyere ya. Anyị na-na Science Museum na London, ebe sere Fool, dị ka ọ na-akpọ, na-enye a ọha ngosipụta. Ọ dị mkpa na m na-adịghị egosi m ezé, Colton-ekwu, n'ihi na ihe banyere ìhè ka ha dị green na sere Fool.
Si m toothless ọnụ ọchị laptọọpụ emepụta a "tụụrụ ime ya" nke ihe ọ ga-amasị agba, dabere na ya na ọnọdụ. The ọnọdụ na-abịa site a "mmetụta analysis" nke na-adịbeghị anya Guardian isiokwu, dị ka ọ na-eme (on nkezi ọgụgụ ndị Guardian bụ a downer, o doro anya na, iche n'ebe ndị stof banyere ugbo). Ụnyaahụ onye-nzuzu di na ndị dị otú ahụ a ọjọọ na ọnọdụ na ọ na zitere onye pụọ unpainted; taa ọ na-enwe mmetụta "nti".
Next-nzuzu agbali agba na a chepụtara echepụta ahịhịa na a chepụtara echepụta aka (n'ezie, ihe oyiyi nke Colton n'aka) na ihuenyo m n'azụ. Ọ mụtara iji na-egosipụta ya na ọnọdụ site na ọrụ na Ventura, ọzọ kọmputa ọkà mmụta sayensị, na Brigham Young University na Utah, onye zụrụ azụ a nural netwọk ịmata nke mmetụta uche àgwà oyiyi site ọdụ ọtụtụ puku ndị mmadụ n'ihu ọtụtụ iri puku ndị osise na-arịọ ha ka ha ịkpado onye ọ bụla na ihe ọ bụla adjectives gbatara m n'obi. The nzuzu now maara na enwu gbaa na agba-egosipụta a ọma na ọnọdụ, na "pencils na uko hatching" ike a picture na bụ "oyi". Mgbe e mere ya, ọ Mbipụta si a na peeji nke na a mesịa onwe-critique. "N'ozuzu, nke a bụ nnọọ ihe a na-egbuke egbuke Eserese,"Ọ na-ekwu. "Nke ahụ dị mma, ma m style ka lowered na ọkwa nke na-egbuke egbuke ebe a. Ya mere, m na a bit annoyed banyere nke ahụ. "
Ebe a na anyị, mmasị ma-arụsi ọrụ ike na ya easel na-ekiri, bụ Sarah Jane Ọnwa, onye na-ese na-egosipụta na Royal Society of Portrait ese ihe. Ya achọghị ịhụ m ezé, ma. "Anyị agba site na ndụ,"Ọ na-ekwu, "Na ị nwere ike ghara ijide a ọnụ ọchị n'ihi nānọkwasi ọdụ. Ọ bụ ya mere nile omenala Portraits na-egosi nnọọ nọrọ jụụ atụmatụ. "
The sere nzuzu bụ a pụrụ iche igwe, na ọbụna ubé ma ama, ma m ghara ghara na Ọnwa bụ fọrọ nke nta niile nke mere m obi ụtọ na-abụ ebe a. Na inwe mmetụta nke ịbụ ndị a na-ese onye dị adị, enwe ha anya na ị na-eche banyere gị, akpali akpali bụ na okwu ire ụtọ. Mmetụta analysis na ọzụzụ data, n'akụkụ aka nke ọzọ, adịghị tinye aka ọ bụla onye ele m anya m na-eche banyere, na okokụre Portraits anaghị agbanwe uche m. Ọnwa na-bụ a ọmarịcha, ata ihe, nke na-adị ozugbo dị ka otu onye hụrụ ibe. The nzuzu di atọ mgbalị nwere àgwà na-amasị m, ma ukwuu n'ime ha dị foto na agawo na ụdị ụfọdụ nke software nyo. Colton ekwusi onye-nzuzu bụ ebe a "na-amụta ga-mma" ma m na anya na-eche: Gịnị mezie?
Leo Benedictus dị ka a na Sarah Jane Ọnwa ...
... Na dị ka uche hụ site sere nzuzu na laptọọpụ. Foto: Murray Ballard
Ana m ewere ụfọdụ ndị ọzọ. Otu ihe, ọ na-enyo na art ọzọ bụ n'ibu karịa na m ghọtara. "M na-agbalị anya na Leo dị ka ihe nkịtị set nke shapes, forms, agba, -aj u,"Ọnwa agwa Colton, "Zụọ eziokwu na nke ahụ bụ a imi. N'ihi na mgbe ị na-amalite ime na, ị nwudo n'elu ihe ị -eche anya dị ka a imi. "
"Gịnị bụ software na-eme bụ ịkwụsị ya rida agba mpaghara,"Colton-ekwu.
"Ee, kpọmkwem,"Ọnwa a kwenyere isoro ọfụma. "Echere m na nke ahụ bụ ihe ndị kasị mma-ese ihe na-eme. Ọ na-transcribing. "N'ikpeazụ ọ na-agwa m ọ bụla obi a ụdị" kinship "na software dị ka ha rụkọrọ ọrụ ọnụ,.
ọzọ ihe, M na-aghọta na ihe dị mkpa abụghị otú igwe ágbá; ọ bụ otú m na-ahụ. Ọnwa m na-aghọta, Echere m. Ọ bụ ihe a onye na m maara otú na-ele, otú ahụ ka m na-eche banyere ya picture. Ma gịnị ka ọ na-eche ka na-sere Fool? Na-na ihe ya Portraits na-agbalị ịgwa m?
Mkpebi Ọnwa na-sere dị nnọọ ka baa ọgaranya; onye-nzuzu ka na-amụta na narị afọ nke omume na-aga.
The translation ule
Google ịsụgharị ahụ bụ nke mbụ mpempe kwesịrị ekwesị akụkọ sayensị emeghị eme na-emezu, na ọ bụ na-ama afọ iri ochie. N'ọtụtụ ụzọ ya na-akowa ebe Ai ka na-. bara uru, n'aka; nnukwu, -enweghị ajụjụ; ma ka clunky dị ka hell, n'agbanyeghị nnukwu ndozi.
Ọ bụrụ na ị na-eji ya, ọ na-arụ ọrụ dị ka nke a: tinye ederede ma ọ bụ web njikọ ke bụla nke 103 akwado asụsụ na ị na-a ike ike translation sekọnd mgbe e mesịrị na ọ bụla nke ndị ọzọ. The ngwa na ekwentị gị ga transcribe ihe i kwuru na mgbe ahụ na-ekwu okwu ya azụ, sụgharịta (32 asụsụ na-akwado); ọ nwere ike na-eji dochie ihe odide nke asụsụ mba ọzọ ihe ịrịba ama ma ọ bụ menu n'ebe ọ bụla ị ezo igwefoto. Ọ dịghị nkọwa dị mkpa nke otú mma na bụ (na ọ bụ free).
Google Asụgharịa bụ ihe ijuanya na-ewu ewu maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ihe dị ka 'm hụrụ gị n'anya' na 'Ị mara mma anya'
A gazuo uwa niile, ọkara a ijeri mmadụ na-eji Google Asụgharịa kwa ọnwa, ukwuu n'ime ndị na-adịghị ekwu okwu English (nke bụ 80% nke ndị mmadụ) ma na-achọ ịghọta na internet (nke bụ 50% English). "Ọtụtụ n'ime anyị na ibu, na n'ezie ọtụtụ n'ime anyị na okporo ụzọ, -abịa site na-emepe emepe ma ọ bụ abụrụ ahịa dị otú ahụ dị ka Brazil, Indonesia, India, Thailand,"Na-ekwu Berak Turovsky, isi nke ngwaahịa management na onye ọrụ ahụmahụ na Google Asụgharịa. Ọ bụ ihe ijuanya na-ewu ewu maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, oke, ọ na-agbakwụnye. "Ihe dị ka 'm hụrụ gị n'anya' na 'Ị mara mma anya', nke ahụ bụ nnọọ juru ebe niile. "
The software ka mgbe niile na-eji otu ụdị nke mgbakọ na mwepụ igwe mmụta: nkwako na internet maka ama sụgharịa ederede - UN declarations, EU akwụkwọ - na nkewa likelihood nke ụfọdụ okwu na nkebi ahịrịokwu kwekọrọ na ibe. The ọzọ data ya achịkọta, mma ọ na-akawanye, ma mmelite mma bibiri akụkụ anya a di na nwunye nke afọ gara aga. N'oge na-adịghị, Turovsky-ekwu, ha ga idokwa ọhụrụ miri emi mmụta algọridim, nke ga-emepụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ aga were were n'ọnụ nsụgharị.
Bụlagodi, e nwere ókè, na ụfọdụ iyi isi mgbe ị na-agwa mmadụ nsụgharị na-aghọta otú aghụghọ ọrụ ha bụ. ros Schwartz na Anne de Freyman afọ-ofufo nye ọrụ a. Ha abụọ bụ ndị ọkachamara French / English nsụgharị, na m kwesịrị abụọ n'ihi na, iji ikpe otú ezi ndị translation bụ na-enweghị ịbụ aga were were n'ọnụ nke asụsụ abụọ, anyị kwesịrị ịsụgharị ugboro abụọ - ozugbo si English n'ime French, otu ugboro ọzọ. Ntụgharị google-eme ọ dịghị ebe nchekwa nke mbụ na ike ime otu ihe ahụ.
M na-ahọrọ a obere akụkụ pụrụ iche ma ọ bụghị karịsịa ọhịa ma ọ bụ ambiguous prose site ná mmalite nke Herzog site Saul bellow. Nsụgharị na-ejikarị achọ onodu, otú ahụ ka m na-agwa Schwartz na De Freyman na o si n'aka a ma ama n'etiti afọ-narị afọ American akwụkwọ.
N'ime ụbọchị ole na ole, Schwartz na De Freyman laghachi a nnọọ ezigbo Facsimile nke ihe odide mbụ. Ebe a na-ụfọdụ nuances na-anwụghị, ma Itie-anọgide a ụtọ na-agụ, na isi pụtara na-abịa gafee kpọmkwem.
Ntụgharị google-ewe nanị ole na ole sekọnd, na n'ihi bụ ma nnukwu na ya erughị eru, weirdly mma n'ebe, na ndị ọzọ weirdly ọjọọ - mbịne "ọ" n'ime "ya" na concocting echiche na Herzog bụ na ịhụnanya. n'ụzọ ọrụ ebube, Ọ na-"gbawara" dị ka a nkọwa nke dike. French nwere dịghị okwu na-agwakọta n'echiche nke "gbajiri" na "onye ara" na gbawara coveys na English, otú De Freyman-eme ka ọ "cinglé", nke na-abịa azụ Schwartz dị ka "crazy".
"Google Asụgharịa ga-ele anya na mgbakọ na mwepụ nke puru omume na-ekwu, nso ke 'gbawara' pụtara?"Turovsky akọwa. "Ma statistically, ọ ga-agbalị ikpebi ma ọ pụtara 'gbawara' ma ọ bụ 'crazy' ma ọ bụ ihe ọ bụla. na, maka igwe, bụ a na-abụghị ndị na-adịchaghị mkpa ọrụ. "Ma ọ bụ ka ọ dị mfe maka mmadụ, ọ bụ ezie na anyị na-adịrị mfe. Ị Ọ nwere ịjụ ma bellow gaara emewo ka Herzog e "gbawara" dị ka ọ na ikpọkidem gbajiri. Mgbe ahụ ị ga-enwe na ya iche bụghị, n'ihi na mmadụ ahụ ndị na-adịghị n'ozuzu ime na. Ya mere, ị ga na-eche ihe ọ pụtara na iche utu, ọ bụrụ na ị na-adịghị ama emehe ye ojiji, na ọ ga-ọwọrọ "crazy", n'ihi na ị na-aghọta na ike nke ihe ị na-agụ. Ma ime ihe a nile, agaghị Google ịsụgharị ga-abụ mara mma nke ukwuu maara, m na-arịọ? Turovsky sọọsọ. "Echeghị m na m ruru eru ịza ajụjụ ahụ."
Mkpebi Ụfọdụ bullseyes na howlers si Google Asụgharịa, mgbe Schwartz na De Freyman bụ aga were were n'ọnụ na kpọmkwem.
35804	3 Art na imewe, Nkeji edemede, Amamịghe echiche (Ai), Mgbakọ, Nsụhọ, Culture, Atụmatụ, Google, Leo Benedictus, Life na style, ígwè ọrụ na-, Science, Technology, The Guardian, UK Izu ụka, izu ụka
← Ise nke Best Ntụgharị Uche Apps Huawei P9 Plus Review →